Deetaan fayyadamaa qajoojiilee fi masakoota LibreOfficekeessa jiraniif tajaajila. Fakkeenyaaf, badheeleen deetaa "Maqaa duraa" fi "Maqaa dhumaa" battalumatti maqaa kee akka maqaa barreessaa galmee haaraatti saaguuf gargaaru. Jalatti kanatti arguu dandeessa Faayilii - amaloota.
Deetaan fayyadamaa muraasni akka to'ataa qubeeffannoon beekamuuf battalumatti kuusaa galmee keessaa irraa dabalama. Dogoggorri qubeessuu yoo argame, sagantichi bakka bu'ootaa tilmaamuuf deetaa fayyadamuu danda'a. Hubadhu jijjiiramni deetaa kan dhugoomu erga LibreOfficelamkaasamee booda.
Deetaa fayyadamaa dhuunfaa kee naquu fi gulaaluuf badhee Teessoo fayyadami.
Title is: Deetaa Fayyadamaa